MY REMEMBRANCE: List of the teachers from Yangon Technological University (Mechanical Department)
List of the teachers from Yangon Technological University (Mechanical Department)
ရန်ကုန်နည်းပညာတက္ကသိုလ် စက်မှုအင်ဂျင်နီယာဌာနမှ ဆရာ/ မ များ
ကျတော် ဒီပို့လေးကို ရေးထားတာတော်တော်ကြာပါပြီ။ အကြောင်းကြောင့် မတင်ဖြစ်တာပါ။ အခုတော့ အမှတ်တရ အနေနဲ့ တင်လိုက်ပါတယ်. ကိုရန်အောင်ရဲ့ scrollbox လုပ်နည်းလေးနဲ့ပါ.
ကျတော်တို့ တတိယနှစ် ကျောင်းရောက်တော့ မောင်မယ်သစ်လွင်ကြိုဆိုပွဲမှာ ပေးတဲ့ စာရွက်ကလေးကနေ ကူးပြီးဖော်ပြလိုက်တာပါ။ 22.2.2002 ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က စာရင်းပါ။ ဆရာ/မ တော်တော်များများက တော့ ကျောင်းတော်ကြီးမှာ မရှိကြတော့ပါဘူး။ တချို့ကလည်း အလုပ်ထွက်။ နိုင်ငံခြားကျောင်းတက်။ တချို့ကလည်း အဘမောင်သောင်းရဲ့ လက်ချက်နဲ့ GTC တွေကိုရောက်။ တချို့ကလည်း GTC လည်းမရောက်၊ကျောင်းကလည်းပျောက်။ တချို့ကလည်း GTC ကျောင်းအုပ်ကြီးတွေဖြစ်။ တချို့ကလည်း ကျောင်းတော်ကြီးမှာ မြဲအောင် စာသင်ရေးမှ တခြားဌာနကို ပြောင်းပြီးကုပ်ကပ်တွဲမြဲအောင် နေကြရပါတယ်။
ကျတော်တို့ သုံးတန်းစတက်တုန်းက ပါမောက္ခဌာနမှုးက ဒေါက်တာကျော်စိန် ပါ။နောက်တော့ တီချယ် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်းပါ။ ကျောင်းပြီးတဲ့အထိ။ နောက်ကျောင်းပြီး တော်တော်ကြာတော့ ဒေါ်မိစန္ဒာမွန်ပါ။ ဆရာဦးစိန်းဝင်းက တော့ အလုပ်ကထွက်သွားပါတယ်(စိတ်နာလို့လို့ ထင်ပါတယ်)။
၁။ ဒေါက်တာကျော်စိန် (ပါမောက္ခဌာနမှုး)
၂။ဦးစိန်ဝင်း (ကထိက) ၃။ဒေါ်ယဉ်ယဉ်ထွန်း ၄။ ဦးခင်မောင်အေး ၅။ဒေါ်ဥမ္မာမြင့် ၆။ဒေါ်သီတာဦး ၇။ဒေါ်စန္ဒာအောင် ၈။ ဒေါ်မြမြခိုင် ၉။ဒေါ်ခင်ဝါဦး ၁၀။ဒေါ်မြင့်မြင်လွင် ၁၁။ ဦးလှသွင်
၁၂။ ဒေါ်ခင်ခင်ထား ၁၃။ဒေါ်သန်းသန်းထိုက် ၁၄။ ဦကျော်မြတ်မိုး ၁၅။ ဦးခင်အောင်လင်း ၁၆။ဒေါ်မြင့်မြင်းအေး ၁၇။ဒေါ်နီနီခင် ၁၈။ဒေါ်မေဖြိုးသူ ၁၉။ဒေါ်ခင်တင့်တင့် ၂၀။ဒေါ်စုစုဟန် ၂၁။ ဒေါ်ယုဇနခင် ၂၂။ ဒေါ်အေးအေးခိုင် ၂၃။ ဦဥာဏ်နိုင်စိုး ၂၄။ဦးမျိုးသူရ ၂၅။ ဒေါ်နွယ်လင်းမင်း ၂၆။ ဒေါ်စိုးစိုးနု ၂၇။ ဒေါ်သက်သက်မွန် ၂၈။ ဒေါ်မိစန္ဒာမွန် ၂၉။ ဒေါ်သိင်္ဂီ
၃၀။ ဒေါ်ခင်ခင်ဦး ၃၁။ ဒေါ်သီတာအောင် ၃၂။ ဒေါ်မိုးမိုးကြိုင် ၃၃။ ဒေါ်ဥမ္မာကြည် ၃၄။ ဒေါ်မျိုးသန်းလှ ၃၅။ ဒေါ်သီသီိခိုင် ၃၆။ ဒေါ်ခင်နွဲ့ကြူ ၃၇။ဒေါ်သန္တာအောင် ၃၈။ ဒေါ်ခင်ဆွေဆွေလတ် ၃၉။ဦးထွန်းမြတ် ၄၀။ ဒေါ်အေးစုသွယ် ၄၁။ ဒေါ်အေးအေးခိုင်(သုတေသနအရာရှိ)
၂ မှ ၁၀ ထိ --ကထိက ၁၁ မှ ၂၉ထိ --- လက်ထောက်ကထိက ၃၀ မှ ၄၀ ထိ သင်/ပြ
Posted by puluque at Tuesday, February 26, 2008